ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေတင်ပေး လိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ – Zartiman
ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေတင်ပေး လိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ
သူမကတော့ “မွေစံချစ် တဲ့ ကိုကိုတို့ရေ😘😘😘 မွေစံရဲ့ tiktok video တွေ ပုံတွေကို ကြိုက်ကြရဲ့လား. . မွေစံကတော့ အခုတလော နာ မည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနော် . .ချစ်ရတဲ့ Fan” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာ မျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယား စရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော် ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက်ရှိ နေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူး လျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေး ပရိ သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူ မှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက် တင်ပေး လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါ ဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေ ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ “မှစေံခဈြ တဲ့ ကိုကိုတို့ရေ😘😘😘 မှစေံရဲ့ tiktok video တှေ ပုံတှကေို ကွိုကျကွရဲ့လား. . မှစေံကတော့ အခုတလော နာ မညျအရမျးကွီးနတေဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနျော . .ခဈြရတဲ့ Fan” ဆိုပွီး အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျ စာ မကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးယား စရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလျနနျးမှစေံရဲ့ အမိုကျစားပုံစံလေးနဲ့ ကွှလေောကျ စရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျော ပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။မျောဒယျလျနနျးမှစေံ ကတော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျလကျြရှိ နတေဲ့ မျောဒယျလျတှေ ထဲမှာ တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနကော ကွျောငွာတှကေိုလညျး ရိုကျကူး လကျြရှိနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမိုကျစားဖကျရှငျလေးတှကေို ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုရော ယောကျြားလေး ပရိ သတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုကိုပါ အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျလျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှေ ကို လူ မှုကှနျ ယကျစာမကျြနှာထကျ တငျပေး လရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါ တယျ။
အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဆို ရငျလညျး မမှားပါ ဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေးပျေါလှငျနပွေီး အမိုကျစားပိုဈ့လေးတှေ ပေးနခေဲ့ပါတယျ။
ကမ်းခြေထက်မှာ ဘစ်ကနီနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လန်းလွန်းနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်